खाबुसिकी खाइस्या र गोदोखाइस्या वीच के फरक छ ? | Nepali In Japan
खाबुसिकी खाइस्या र गोदोखाइस्या वीच के फरक छ ?
जापानमा व्यवसाय गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कम्पनीको संरचना छनौटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हचुवाकै भरमा कम्पनी खोलेका धेरै नेपालीहरुले अनावश्यक दुख पाएका र आवश्यकताभन्दा बढि लागत लागेका धेरै उदाहरणहरु जापानको नेपाली समुदायमा भेटिन्छ । त्यस्ता समस्याहरुबाट जोगिनका लागि लागि हरेक प्रकारका कम्पनीको क्षमता र सिमितताको बारे सहि बुझाइ हुन आवश्यक छ । आफ्नो कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन र व्यवसायिक लक्ष्यबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । जापानमा खाबुसिकी खाइस्या(केके) र गोदो खाइस्या (जीके) गरेर दुई प्रकारका कम्पनी विदेशीहरुवीच बढी परिचित छन् । यसमा पनि केके अझ बढी लोकप्रिय छ र यसमा ८० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनी समावेश छन् । तर एउटा पक्ष अर्को पक्षभन्दा ‘उत्कृष्ट’ हुँदैन । दुवै प्रकारमा फाइदा र वेफाइदा हुन्छन् ।
खाबुसिकी खाइस्या (केके) भनेको के हो ?
केके को संरचना ‘अमेरिकी सी कर्पोरेशन’ को जस्तै छ । जापानको प्रमुख प्रकारको कर्पोरेशन भएकाले उपभोक्ता, कर्मचारी र व्यावसायिक समुदायमाझ कम्पनीको प्रतिष्ठाबारेको धारणा राम्रो छ । केकेले शेयरधनीहरुलाई व्यक्तिगत कानूनी दायित्वबाट संरक्षण गर्छ र उससँग शेयर विक्री र भण्डारण जस्ता माध्यमबाट अतिरिक्त पूँजी बढाउने क्षमता पनि हुन्छ । शेयरधनी र व्यवस्थापनबीच स्पष्ट रुपमा देख्न मिल्ने संस्थागत भिन्नता रहन्छ । यद्यपि एकै समयमा शेयरधनी र कम्पनीको निर्देशन बन्न सकिने सम्भावना भने रहेको छ ।
सबै केकेहरुमा कम्तिमा पनि एउटा निर्देशक हुन आवश्यक छ र उ जुनसुकै देशको नागरिक पनि हुन सक्छ ।
यस प्रकारको कम्पनी सूचीकृत गर्न धेरै महङ्गो पर्छ साथै सूचीकृत हुन पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि तुलनामा जटिल छ । यसमा विभिन्न आकारका धेरै कम्पनीलाई समायोजित गर्न सकिन्छ । केके मध्यम तथा ठूला आकारका कम्पनीहरुका लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ । तर यो साना कम्पनी र एकल व्यक्तिको सञ्चालनमा भएको व्यवसायमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
गोदो खाइस्या (जिके) भनेको के हो ?
गोदो खाइस्या (जीके) लिमिटेड लायविलिटि कम्पनी (एलएलसी) को जापानी भर्सन हो । जापानमा जीकेले सन् २००६ मा मात्रै कानूनी मान्यता पाएको थियो । यसले शेयरधनीहरुका लागि सिमित संरक्षण प्रदान गर्ने भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्तिको कानूनी संरक्षण चाहने साना व्यवसायीका लागि यो उपयुक्त संरचना हो । जीकेको सूचीकरण प्रकृया केकेभन्दा सजिलो र सस्तो छ । यसका लागि आर्टिकल्स अफ इन्कर्पोरेशज, सञ्चालन समितिको निर्माण र सदस्यबीचको बैठक गरिरहनु पर्दैन । तर जीकेलाई जापानी शेयर बजारमा सूचीकृत गर्न सकिँदैन साथै शेयर विक्री गर्न र स्टक विकल्प जारी गर्न पनि मिल्दैन । यसले व्यवसाय सञ्चालनका अतिरिक्त पूँजी निर्माण गर्ने क्षमता सिमित गरिदिन्छ ।
यसैगरी केकेमा जस्तो यसमा शेयरधनी र निर्देशकबीच संस्थागत विभाजन पनि हुँदैन । जीकेका लगानीकर्ताहरु कम्पनी सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कानूनी रुपया योग्य साझेदार हुन्छन् ।
जीकेमा लगानीको आकार अधिकारीको समान हुँदैैन र यसले भविष्यमा बाहिरि लगानीको आवश्यकता परेमा समस्या दिन सक्छ ।
जीके इन्कर्पोरेशन प्रायजसो सानादेखि मध्यम आकारका कम्पनीका लागि उपयुक्त छ । जापानमा जीके केकेजति परिचित छैन । यसमा उत्कृष्ट कर्मचारी ल्याउन नयाँ उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने अवसरको पनि कमी हुनसक्छ । तर विस्तारै विस्तारै यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँदैछ । दुवै विकल्पको लागत र फाइदाको मूल्याङ्कन गरेर कुन विकल्प रोज्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्न सकिन्छ ।
केके र जीकेबीचको भिन्नता तल प्रस्तुत गरिएको छ
खाबुसिकी खाइस्या (केके)
फाइदाः स्थापित प्रतिष्ठा, जापानी उपभोक्ता, व्यावसायिक साझेदार र कर्मचारीले बढी विश्वास गर्ने र बढी मापनयोग्य ।
वेफाइदाः स्थापना गर्न महङ्गो पर्ने, कडा नियामक आवश्यकता
सेटअप लागतः ३ लाख ५० हजार येन
दायित्वः शेयरधनीको शेयरमा भएको लगानीमा सिमित
लिमिडेट लायविलिटि कर्पोरशेन (एलएलसी) को जापानी भर्सन
फाइदाः स्थापना गर्न सस्तो, अधिकांश कानूनी सुरक्षा केके सँग मिल्छ ।
वेफाइदाः अतिरिक्त पूँजी ल्याउन सक्दैन र सार्वजनिक शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पनि असमर्थ छ । सदस्यको लगानी र अथोरिटिको लगानीमा समानता हुँदैन ।
सेटअप लागतः २ लाख येन
– Shindome Partners Group को सहयोगमा तयार पारिएको
Prevक्लिनिक वा अस्पताल ? जापानमा उपचारका लागि कुनमा जानु राम्रो ?
Nextयस्तो छ टोकियोमा अर्ध-आपतकाल सकिएपछिको सम्भावित अवस्थाहरु